Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dhibaatada lagu hayo Soomaalida Koofur Afrika – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladeda Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay rabshadaha ka socda dalka Koonfur Afrika ee lagu dilay Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku noolaa dalkaas, sidoo kalena lagu boobay goobo Ganacsi oo ay leeyihiin Dad Soomaali ah.
Hadal-qoraal ah oo kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda ay aad uga walaacsan tahay rabshadaha burcad hubaysan ay ku dileen muwadiniin Soomaali ah, kuna dhaawaceen kuwa kale, isla markaana ku boobeen goobahooda ganacsi.
Dowladda Federaalka ayaa ugu baaqday dowladda Koonfur Afrika inay dadaal ballaaran ku bixiso ka ilaalinta muwaadiniinta Soomaaliyeed falalka arxan darrada, si loo hubiyo badbaadada noloshooda, dukaamadooda iyo ilaalinta xuquuqdooda.
“Soomaaliya waxay ku faanaysaa xiriirka taariikhiga ah ee ay la leedahay dadka Koonfur Afrika intii ay ku jireen halgankii ka dhanka ahaa midab kala sooca iyo heerka ay gaarsiisneyd taageerada badan ee siyaasadeed, dhaqaale iyo istiraatiijiyadeed ee ay siisay in muddo ah” ayaa lagu yiri Qoraalka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda.
Dibadbaxyaal taageersan Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ee la xiray, Jokob Zuma aya waxay weli Rabshado, Boob, dilal iyo dhac ka wadaan qeybo ka mid ah dalkaasi.
Toboneeyo qof oo Muwaadiniin Soomaali ah ayaa ku geeriyooday rabshadaha ka socda Koonfur Afrika, waxaana Madaxweynaha dalkaas Sayral Ramafoosa uu xusay in ugu yaraan 10-qof lagu dilay rabshadaaasi, halka in ka badan 490 oo kalena Xabsiyada la dhigay.
Wasiiro katirsan xukuumadda Rooble oo hadalo kulul isdhaafsaday